ဘဝမှတ်တိုင်:3Trusted Friends ဖြင့် Facebook အကောင့် Hack နည်း နှင့် ကာကွယ်နည်း
3 Trusted Friends ဖြင့် Facebook အကောင့် Hack နည်း နှင့် ကာကွယ်နည်း
အခုပြောပြမယ့်လမ်းကတော့ လူတိုင်းသတိမထာမိတဲ့အချက်တွေပါ သတိပြုမိတဲ့သူတွေလည်ရှိမှာပါ မရှိတဲ့သူတော့ တော်တော်များပါတယ် ကျနော်တွေ့သမျှတော့ တော်တော်များတယ် ဒါပေမယ့်လည် သွာမပြောရဲဘူး တော်ကြာကိုယ်ပြောပြီးမှ သူ့အကောင့်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြဿနာရှာမှာစိုးလို့။ ကျနော်တွေ့သမျှ
ထဲက သံဃာတော်တွေပိုင်တဲ့အကောင့်တွေလောက်ပဲ သတိပေးပြောပါတယ်... ကိုယ်တွေအချင်းချင်းတော့မပြောရဲလို့ အခုလိုပိုစ့်လေးတင်ဖြစ်သွားတာပါ အောက်မှာလေ့လာကြပါ..
အထက်ပါပုံအတိုင်း ကျနော်တို့ ပစ်မှတ်ရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်က About ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ် Contact Info မှာ အကောင့်ကိုဖွင့်ထာတဲ့ Email ကိုဖွတ်ပေးမယ့်
ဖေ့ဘုတ်မေးလ်ကိုတော့မဖွက်ထာတဲ့အတွက် အဲဒီပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အဲဒီမေးလ်နဲ့အကောင့်ကိုယူပါမယ်..ပုံမှာပါတဲ့မေးလ်ကို Copy ကူးယူလိုက်ပါ..ထို့နောက်
Facebook – Browser ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီးနောက် အထက်ပါပုံအတိုင်း Email or Phone ဆိုတဲ့ Box မှာ စောစောက ကူးယူလာတဲ့ဖေ့ဘုတ်မေးလ်ကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ်
ထို့နောက် Forgot your password? ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Email, phone or Facebook username ဆိုပြီးအထက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါတယ်။Email, phone or Facebook username ဆိုတဲ့ Boxမှာ စောစောက ကူးယူလာတဲ့ဖေ့ဘုတ်မေလ်ကိုဖြည့်လိုက်ပါ ..ဖြည့်ပြီးပါက Search ဆိုတာကိုနှိပ်ပါက ကျနော်တို့လိုချင်နတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ပေါ်လာပါမယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်း သင့်အကောင့်လားလို့ဆိုပြီးမေးလာပါမယ်.. အဲဒီမှာပါတဲ့ Yes , This is my account ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အထက်ပါပုံအတိုင်း Pasword ပြန် rest လုပ်မလားလို့ မေးပါလိမ့်မယ် ခဏနေအုန် ဘာမှမနှိပ်ပါနဲ့။ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းစလာပါပြီး ကျနော်တို့ ရယူမို့ကြိုစားနေတဲ့ ဒီအကောင့်ကို အသုံးမပြုတာ အတော်ကြာနေတယ်ဆို I have on longer use this account ဆိုတာပေါ်နေပြီး။လက်ရှိအသုံးပြုနေဆဲဆိုပါက No longer have access to these? ဆိုပြီးပေါ်နေပါမယ် အခုကျနော်ယူမယ့်အကောင့်က သုံးနေဆဲအကောင့်ပါ.အဲဒီတော့ No longer have access to these? ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
I have no longer use this account ကို နှိပ်လိုက်ပြီးပါက အထက်ပါပုံအတိုင်း
Please enter an email address that you know you can access. We'll use this address to send you messages about recovering your account.
ဆိုပြီးတော့ box ထပ်ကျလာပါမယ်အဲဒီမှာ email address ဖြည့်စွက်ရမယ့်မေးလ်က Facebook အကောင့် လုံးဝမဖွင့်ရသေးတဲ့ မေလ်အသစ်ဖြစ်ရပါမယ်.အဲဒီမှာပုံအတိုင်း
သို့သော်... ကျနော်တို့ဖြည့်လိုက်တဲ့မေးလ်ကို ဖေ့ဘုတ်ကနေ မေးလ်ပို့လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်ဆိုတော့ Security layer ကြောင့်ပါ။
ကယ်ကျနော်တို့မေးလ်အသစ်ဖြည့်ပြီးပါက Continue ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်..။
အထက်ပါပုံကတော့ ဒီအကောင့်ကို ရယူရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်ကိုပြထားတာပါ..ထို့နောက် Continue ဆိုတာကိုပဲ ဆက်နှိပ်ပါ
စပါပြီ3းtrusted friends အစီစဉ် ကျနော်တို့ရယူမယ့် Facebook အကောင့်ထဲက3trusted friends ရွေးရပါတော့မယ် အဲဒီအကောင့်ထဲမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့
3 trusted friends အစီစဉ်အောင်မြင်အောင် အကောင့်တွေကြိုတင်အက်ထာပြီးတော့ အဲဒီထဲက ကျနော်တို့ အက်ထာတဲ့အကောင့်3ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်
အကောင့်3ခုရွေးပြီးပါက Continue ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ..(မှတ်ချက်-အကောင့်တစ်ခုရွေးပြီးတိုင်Continueဆိုတာကိုနှိပ်ပါ)
အထက်ပါပုံအတိုင်း သူငယ်ချင်3းယောက်ရွေးပြီးပါက Send Codes to Friends ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
အထက်ပါပုံအတိုင်း ကျနော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အကောင့်3ခုကို ကုဒ်တွေပို့လာပါမယ် အဲဒီကုဒ်တွေကို ဖြည့်ပြီးပါက Submit Condes ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
အဲဒီအဆင့်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့ရယူမယ့်အကောင့်ကို Recover လုပ်ရပါပြီ။
ဒီလိုအရမ်းလွယ်ကူတဲ့ ဟက်နည်းလမ်းပါ... ဘာ Tool မှမသုံးပဲ ဟက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်လွယ်တာလည်းဆိုတော့ Security Question ကိုမခံထားလို့ပါ တကယ်လို့ Security Question ခံထားလည်း လွယ်တဲ့ Security Question ပြုလုပ်ထားပါက ရယူသွားမည်သာ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ အကောင့်ယူလို့မအောင်မြင်ရင်တောင် အဲဒီအကောင့်သေချာပေါက် Lock ကျပါမယ်.အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
1- Facebook ဖွင့်ထားတဲ့ Email ကို Only Me လုပ်ထာပါ။
2- Facebook ကပေးတဲ့ Email ကိုလည်း Only Me လုပ်ထားပါ။
3- Security Question ကို လေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်ထားပါ။
Security Question ကို ပြီးပြီးရောဆိုပြီး အလွယ်တကူတွေထားတော့ ရယူမယ့်သူက အေးဆေးယူသွာမှာပေါ့။ Security Question လေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်ထားရင် အကောင့်ဟက်ခံရခြင်းမှစိတ်ချရပါမယ်။
အဓိကသတိပေးချင်တာကတော့ Security Question လေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်ထားပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အခုပိုစ့်လေးကို မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အကောင့် ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေးပေးပါရန် တိုတ်တွန်းလိုက်ပါသည်။
by ဖေ့ဘုတ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/11/2014 05:12:00 pm